सामसु Galaxy ग्यालेक्सी होम: यो कहिले मार्केटमा आउँछ? | Androidsis
हामी पर्खिरहेका छौं सामसु Galaxy ग्यालेक्सी होम प्रक्षेपण। तर, एक बर्ष भन्दा बढी बितिसकेको छ र कोरियाली निर्माताबाट अपेक्षित स्मार्ट स्पिकरको कुनै चिह्न छैन जुन यो आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी गुगल होम र अमेजन इकोको साथ खडा गर्न चाहान्छ। के भइरहेको छ? यो नयाँ लगभग एप्पल एयरपावर हुन सक्छ?
जबकि यो सत्य हो कि सियोल-आधारित फर्मले एक रिलीज मिति घोषणा गर्‍यो, अन्तमा उनको सामसु Galaxy ग्यालेक्सी होमको बिक्रीमा ढिलाइ गर्नु पर्‍यो। सामसु ofको मामलामा उनले कारणहरूको वर्णन गरेनन् जुन एप्पलले आफ्नो खुशी बहु मल्टि डिभाइस वायरलेस चार्जिंग बेसको साथ गरिरहेको थियो। र अमेरिकी कम्पनीले अन्तमा स्वीकार गर्नु पर्दछ कि यसको सम्मानित तरीकाले काम गर्न पाउने कुनै तरिका थिएन। के यसको आवाज सहायकसँग सामसु toमा त्यस्तै केही हुनेछ? सम्भवतः हो।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी होमको साथ समस्या यसको हार्डवेयर होइन, तर यसको सफ्टवेयर हो
केसहरू diametrically फरक छन्, हो। यद्यपि एप्पलले कारण पहिचान गर्न चाहेनन्, किनकि यसले केवल यति मात्र सीमित तुल्यायो कि उनीहरूले एप्पल एयरपावर सुरू गर्न सक्दैनन, यो खुला गोप्य कुरा हो कि काटिएको एप्पलको फर्मले भोग्ने अत्यधिक तवरले समस्याहरू पार गर्न सक्षम भएन। बहु-उपकरण वायरलेस चार्जिंग डक जब फोन, स्मार्टवच र ट्याब्लेट जडान गर्दै छ।
आउनुहोस्, एप्पलले तापक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले खेर फाल्न सक्दैन। र हार्डवेयरमा त्यो समस्याको कारणले अन्तमा एप्पल एयरपावर अमेरिकी कम्पनीका लाखौं ग्राहकहरूको दिमागमा रहनेछ। के सैमसंग ग्यालेक्सी होमको साथ पनि त्यस्तै हुन्छ? हो र होईन।
कोरियाली निर्मातासँग ध्वनि उपकरणहरू निर्माण गर्न विशाल अनुभव छ। तपाईंले भर्खर यसको पूर्ण परिवारलाई देखाउनका लागि स्पिकरहरू र ध्वनि बारहरू देखाउनका लागि हुनुहुन्छ। एशियाई फर्मसँग यस क्षेत्रमा केही शीर्ष समाधानहरू छन्, त्यसैले यो स्पष्ट छ कि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी होम समस्या यो हार्डवेयर स्तरमा होइन, तर सफ्टवेयर स्तरमा हो।
र यो त्यहि हो जहाँ यो आउँछ Bixby, सामसु fromबाट खुशीको सहयोगी। यसको महान प्रतिद्वन्द्वी एलेक्सा र गुगल सहायकको पछाडि एउटा प्रणाली। हो, सामसु reallyले वास्तवमै राम्रो काम गर्छ, तर यसको कृत्रिम बुद्धिमत्ताले गुगल र अमेजनले सिर्जना गरेकोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। निस्सन्देह, निर्माता घडीको बिरूद्ध काम गरीरहेको छ कुनै उत्पादनको स्थितिमा ल्याउनको लागि जुन यी प्रतिद्वन्द्वीहरूको साथ खडा हुन सक्षम छ।
लास भेगासमा CES को अन्तिम संस्करणको समयमा पनि उनीहरूले आफ्नो स्मार्ट स्पिकरको एक मिनी संस्करण प्रस्तुत गरेका छन्। पहिले नै हामी तपाईंलाई सामसु Galaxy ग्यालेक्सी होम मिनीका केही छविहरू देखाउँदछौं, र अब यो एक वास्तविकता छ। सबै भन्दा राम्रो? यो निर्माताले ग्यारेन्टी गरेको छ कि यो २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा बजारमा पुग्नेछ।
सियोल-आधारित निर्माताले सामसु Smart स्मार्टटिings्ग्सको साथ निर्बाध रूपमा काम गर्नको लागि यसको आफ्नै भ्वाइस सहायकमा जोड दिन्छ, कोरियाली फर्मले यसको सम्पूर्ण दायराका लागि सिर्जना गरेको स्मार्ट इन्टरफेस। IoT समाधानहरू। र अवश्य पनि, हाल विक्स्बीसँग सही ढ work्गले काम गर्न सक्षम हुने क्षमता छैन। वा यो जस्तो देखिन्छ। के उनीहरूले सैमसंग ग्यालेक्सी होम मिनीलाई यो ठक्करबाट रोक्न प्राप्त गर्नेछन्? अवश्य हो, र यो मिनी संस्करण सुरू गर्नुहोस् किनकि यो सस्ता हो, त्यसैले यो अधिक प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्नेछ।
यस तरिकाले, उनीहरूसँग चालकको ठूलो सीमान्त हुन्छ ग्राहकहरूलाई गिनी पिगको रूपमा प्रयोग गर्न र तिनीहरूको आवाज सहायकले सही ढ works्गले काम गर्छ कि भनेर जाँच्न, सुरू गर्ने विचार गर्नु अघि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी होम बेच्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि यस मोडेलले उच्च-अन्त समाधानहरूको सामना गर्नु हो, त्यसैले यसको ध्वनि गुणस्तर धेरै उच्च हुनेछ, र त्यसकारण यसको मूल्य पनि।
अर्कोतर्फ, यो सम्भव छ कि सामसु its आफ्नो होसमा आयो र स्मार्ट वक्ताहरूको परिवारलाई जीवन दिन एलेक्सा वा गुगल सहायकमा शर्त लगाउने निर्णय गर्दछ। स्पष्ट रूपमा यसको अर्थ विज्ञापन होBixby को लागी कडा हिट, तर यो चलाखी चाल हो। सबैभन्दा बढी, किनकि नोकियासँग जे भएको थियो उस्तै उस्तै उसको हुन सक्छ (तल्लो तहमा): एन्ड्रोइड इकोसिस्टम अपनाउनुको सट्टा उनले सिम्बियनको बारेमा सोचे र त्यसपछि आफैंले सामना गर्ने नसक्ने नयाँ अपरेटि system प्रणालीको बारेमा सोचे। गुगल सिर्जना गरियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » के सैमसंग ग्यालक्सी होम एप्पल एयरपावरको नयाँ केस हो?
यी केसहरूले LG G9 ThinQ को डिजाइनको पुष्टि गर्दछ